प्रदेश-२ मा सरकार फेरिने चर्चा- ‘को बन्छ मुख्यमन्त्री ?’ – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/प्रदेश-२ मा सरकार फेरिने चर्चा- ‘को बन्छ मुख्यमन्त्री ?’
प्रदेश-२ मा सरकार फेरिने चर्चा- ‘को बन्छ मुख्यमन्त्री ?’
जनकपुरधाम : कोरोनाको महामारीबीच नेकपामा किचलो चलिरहँदा प्रदेश- २ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्री मण्डलमा नयाँ अनुहार ल्याउने कि पुरानै राख्ने बहस सुरु भएको हो।
जेठको पहिलो साता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकरण भएको थियो। त्यस पश्चात गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेता चुन्न लबिङ भइरहेको छ।
पार्टी संसदीय दलका नेता जो बन्छ उ नै मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। प्रदेश-२ मा जसपासँग सरकार गठन गर्ने बहुमत छ। तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर प्रदेश-२ मा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
जितेन्द्र सोनल राजपाको तर्फबाट संसदीय दलको नेता थिए भने प्रमुख सचेतक प्रमेश्वर साह थिए। संघीय समाजवादी पार्टीबाट लालबाबु राउत संसदीय दलको नेता छनोटपछि उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। राउतको पार्टीको संसदीय दलको उपनेता प्रदेशसभा सदस्य रामशिष यादव थिए भने, प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव।
नेपालको संविधान-२०७२ को धारा १८९ अनुसार संसदीय दलको नेता छनोट गरिनु पर्ने व्यवस्था छ। संसदीय दलको नेता मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने प्रवधान छ। पार्टी एकीकरण पश्चात एउटै दलको नेता चुन्नु पर्ने बाध्यता पार्टीसँग छ।
अर्को थरी प्रदेश सभा सदस्यले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाट संसदीय दलको उपनेता रहिसकेका स्वच्छ छविका प्रदेशसभा सदस्य रामशिष यादवलाई संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरिहेका छन्।
पार्टीका नेता र प्रदेश सभा सदस्यहरुले अर्का प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमनलाई संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्ष कहाँ लविङ गर्दैछन्।
जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्न सारा शक्ति लगाइरहेका छन्। उनी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको खास मान्छे हुन्। आर्थिक विकासमन्त्री विजयकुमार यादव पनि मुख्यमन्त्री पदका दाबेदार हुन्। उनी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नजिकका हुन्।
मन्त्री सोनल र यादव संसदीय दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहँदा पार्टीका कतिपय प्रदेशसभा सदस्य उनीहरुकोे पक्षमा छैनन्। सरकारमा रहँदा सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै उनलाई रुचाउँदैन। पार्टीको तर्फबाट सरकारमा रहेका अधिकांस मन्त्री फेरिनु पर्ने र स्वच्छ छविका नयाँ अनुहारलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने माग प्रदेश सभा सदस्यले गरिरहेका छन्।
केही प्रदेशसभा सदस्य लालबाबु राउतलाई नै संसदीय दलको नेता चुनेर हालका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अगाडि सारेर सबै मन्त्री फेर्नु पर्ने पक्षमा छन्।
मधेशमा कोरोना छाडेर पद प्रतिष्ठाको लोभमा नेताहरु दौडधुपमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीका ५५ प्रदेशसभा सदस्य छन्। २९ जना तत्कालीन समाजवादी र २५ जना राजपाबाट प्रदेश सभा सदस्य छन्। एक स्वातन्त्र निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य गरेर यो पार्टीको पक्षमा ५५ जना छन्। जसमध्ये सभामुख र उपसभामुख बनेपछि संसदीय दलको चुनावमा मतदान गर्ने मतदातको संख्या ५३ छ।
५३ जना मध्ये एक संसदीय दलको नेता बन्छ। त्यो मुख्यमन्त्री बन्ने छन्।
Beraking News. मन्त्रालयले भर्खरै जारि गर्यो यस्तो सुचना, भोलिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने !
सावधान रहौ: नेपाल सरकारले बिहानैबाट लगायो एस्तो कडा नियम, उल्लंघन गर्नेलाई १ महिनासम्म कैद ! [सुचनासहित]
बु’वा छो’री एक्लै ब’स्ने घ’रमा,७ बर्षीय छोरीलाई बारम्बार ब’लात्का’र,य’स’री भ’यो प’र्दा फा’स-भिडियो हेर्नुहोस
आ’खि’र क’स’ले क’स’को बा’टो का’ट्यो ?